WatchOS 3 Beta 7.4 Inosvika yeVagadziri | Ndinobva mac
WatchOS 3 Beta 7.4 Inosvika yeVagadziri
Vhiki rino tiri kuona kusvika kwe beta shanduro dzeApple software dzichisvika nenzira yakapatsanurwa. Haisi kazhinji nzira iyo iyo Cupertino kambani inotangisa ayo beta vhezheni asi vhiki ino iri kuve uye ichangoburwa kusvika ndeyeOSOS 3 beta vhezheni 7.4.
Nhau dziri mune ino beta yechitatu yakanangana nekudzikama uye kuchengetedzeka kwesystem, hapana kuwanda kushanduka kwekushanda mairi uye chatiri kumirira ndechekuti Apple inoitangisa zviri pamutemo kuti ikwanise kunakirwa nekuvhurwa kweiyo iPhone ne mask yedu. Iyi ndiyo huru yekufungidzira mune beta vhezheni inotora mavhiki mashoma ekuyedzwa uye inoita kunge yakanyatsogadzikana mune zvese zvitsva zvaro.
Pachezvangu, avo imi munondiziva munotoziva kuti handisi kuzoshandisa beta shanduro kupfuura idzo dzeMac, asi sarudzo yekuvhura iyo iPhone neiwachi pachayo, izvo chaizvo zvinogona kuitwa neMac, zvinondikanda zvizhinji. Ndichiri kubatirira kunze ndisina beta vhezheni asi avo vanotova neiyo yapfuura vhezheni yakaiswa vanongofanira kugadzirisa kubva kuApple Watch zvaunofarira kuburikidza neOTA uye voila, ivo vachatove vaine beta 3 yakaiswa.
Izvo isu zvatiri pachena ndezvekuti nemabeta vhezheni eApple Watch, isu tinofanirwa kungwarira zvikuru nekuti dambudziko mariri raigona kusiya wachi yedu zvachose isinga shande. Chinhu chine musoro ndechekuti izvi hazviitike kubva ipapo tanga tiine yeruzhinji beta vhezheni kwenguva yakati kunyangwe pawatch uye zvinoita kunge zvinoshanda zvakanaka, Asi ziva kuti mabheja ndeeyedzo shanduro uye kuti havagone kushanda nguva dzese zana% mumabasa avo uye mune zvinoshandiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » WatchOS 3 Beta 7.4 Inosvika yeVagadziri
Wolfwalkers uye Stillwater Mifananidzo Yemafirimu Akasarudzika Annie Makomborero
Vhidhiyo inoburitswa neyekutanga iMac ine "yakagadzirirwa" M1 processor